Wargeys Caalamiya Oo Ka Hadlay Ascaarta Qadiimiga Eh Ee Somaliland Kuna Sifeeyey Dhaqanka Ugu Wanaagsan Adduunka | Berberatoday.com
Wargeys Caalamiya Oo Ka Hadlay Ascaarta Qadiimiga Eh Ee Somaliland Kuna Sifeeyey Dhaqanka Ugu Wanaagsan Adduunka
Hargeysa(Berberatoday.com)-Wargeyska Gulf News ee ka soo baxa dalka Imaaraadka carabta, ayaa maanta baahiyey qormo xiiso badan oo ku saabsan taariikhda soo jireenka ah aataarta qadiimiga ah ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Wakaaladda wararka Somaliland ee SOLNA, ayaa xigatay maqaalka Gulf News daabacay maanta oo ciwaan looga dhigay “Laas Geel: Dhaqanka ugu wanaagsan Dunida.”
Gulf News wuxuu tilmaamay in goobta qadiimiga ah ee Laasgeel ay daahfureen sannadkii 2002-dii cilmi-baadheyaal ka socday dalka Faransiiska.
Prof. Axmed Ducaale Jaamac oo ah madaxa qaybta Arkiyoolajiga ee wasaaradda ganacsiga, wershadaha iyo dalxiiska Somaliland ayaa sheegay in aataartani u muuqato inay jireen saddex kun oo sannadood ciise hortii. Prof. Ducaale waxa uu xaqiijiyey inay aataarta Somaliland aqoonsi uga raadinayaan Hay’adda UNESCO.